Hub fara badan oo laga soo qabtay degmada Deyniile – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hub fara badan oo laga soo qabtay degmada Deyniile
MAREEG 26 March 2015 27 March 2015
Mareeg.com-Ka dib howlgal ciidamada Nabad sugida Dowlada Federaalka Soomaaliya ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Deyniile ee gobolka Banaadir ayaa waxay ku soo qabteen Hub ay ku sheegeen inay lahaayeen ururka Al-shabaab.
Hubka ayaa isugu jiray qoryo farabadan bistoolado iyo rasaas farabadan oo ay lahaayeen Ururka Al-shabaab Ay ku aasteen Guryo ciidamadu ay Baritaano ka sameyeen kuwaas oo ku yaala Deyniile.
Afhayeenka wasaaradda Amniga Gudaha Maxamed Yuusuf Cisman oo warbahinta kula hadlayay degmada Deyniile ayaa sheegay in ujeedada howlgalkani yahay adkeynta iyo sare u qaadidda ammaanka Muqdisho.
Sidoo Kale Afhayeenka ayaa xaqiijiyay in howlgalka lagu soo qabtay hub iyo rasaas farabadan oo Shabaab ku aasteen guryo ku yaala xaafadaha degmada Deyniile.
Howlgalo amniga lagu sugayay ayaa maalmihii u danbeeyay ka socday magaalada Muqdisho,kuwaasi oo lagu baarayay Gawaarida iyo dadweynaha.
Tagged dayniile, hub, mogadishu, muqdishu, Somalia